Oniversiten’i Maninday Toliara: nirotaka ny mpianatra, nirefotra ny lakrimozena, 18 voasambotra | NewsMada
Par Taratra sur 16/06/2021
Mbola resaka fitakiana vatsim-pianarana ihany no anton’ny savorovoro tany Toliara, omaly tontolo andro. Niafara tamin’ny sakoroka an-dalambe ny hetsiky ny mpianatry ny oniversiten’i Maninday. Tsy nifankahitana ny lakrimozena natoraky ny Emmo/Reg. 18 tamin’ireo mpanao fihetsiketsehana no voasambotra.
Raikitra ny savorovoro niafara tamin’ny fifandonana teo amin’ny mpianatry ny oniversiten’i Maninday sy ny mpitandro filaminana. Vokany, mpianatra miisa 18 indray voasambotra, omaly. Raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, omaly maraina tamin’ny 4 ora, niakatra tao an-tampon-tanànan’i Toliara ka nizarazara tamina toerana maro ireo mpianatra. Tokony ho tamin’ny 6 ora, nanakana ny lalam-pirenena RN7 eo Sanfily ny andiany voalohany. Nirefodrefotra avy hatrany ny grenady lakrimozena avy amin’ny mpitandro filaminana nanakanana ny hetsika nataon’ireo mpianatra teo amin’ny lalam-pirenena. Taorian’izay, raikitra koa ny fifandonana teo anoloan’ny biraon’ny presidansa nanaparitahana ireo mpianatra andiany faharoa. Tsy nijanona teo anefa izany fa nitohy hatrany Maninday ny fifanenjehana sy ny fandefasana grenady mandatsa-dranomaso. Efa tamin’ny 2 ora tolakandro vao nifarana izany, raha ny fampitam-vaovao voaray hatrany. Vokatr’izay fifandonana izay, nahatratra 18 ireo mpianatra voasambotra ka nentina nanaovana fanadihadiana. Nisy koa ireo mpianatra naratra vokatry ny fifandonana.
Voakasi-tanana hatramin’ny mpanao gazety…
Isan’ireo voadaroka koa ny mpanao gazety nanangom-baovao teny an-toerana. Nitondra vahaolana ny olobe ao Toliara… Manoloana ny zava-misy sy ny olana sedrain’ny mpianatry ny oniversiten’i Maninday, Toliara, nangataka fihaonana amin’ny OMC ny raiamandreny (olobe) hijerena vahaolana maharitra manoloana izao raharaha izao. Nankasitraka izany ireto olobe ireto tamin’izao fihaonana izao. Isan’izany ny famotorana ireo mpianatra, ny fampahafantarana fa havoakan’ny minisitera ny “habilitation” momba ny master. Momba ny vatsim-pianarana indray, efa misy ny fandaminana ka ny iray volana no hivoaka ny faran’ny volana izao ary efa ao amin’ny Paositra. Ny volana jolay ho avy izao kosa ny roa volana ambiny. Araka izany, manainga ny rehetra ho tony ireto olobe ireto hisian’ny filaminana hahafahana mamita ny taom-pianarana. Marihina fa tsy nandray anjara amin’izao dinika izao ireto mpianatra ireto. Nilaza kosa anefa ireo mpianatra fa tsy hanaiky ny fanapahan-kevitra nivoaka ka rahampitso (anio io) no hamantarana ny tohin’ny hetsika indray na hitohy na ho tapitra.